Caadooyinka Giriigga | Wararka Safarka
Susana Garcia | | Greece
La Ilbaxnimada Giriiggu waa mid ka mid ah kuwa ugu faca weyn taas oo aan leenahay tixraac. Dhaqankani wuxuu si qoto dheer ugu xididaysan yahay badda Mediterranean-ka, sidaa darteed caadooyinkoodu wax badan ayey ku leeyihiin taariikhdiisii ​​hore sida ilbaxnimo weyn iyo xiriirka ay la leeyihiin badda. Caadooyinka Giriigga ayaa xoogaa lagu ilaalinayay sanadihii la soo dhaafay, gaar ahaan jasiiradeeda, meelaha aan ku arki karno dhaqammada qotada dheer.
ka caadooyinka Griiga waxay noqon karaan wax laga naxo mararka qaarkood dadka qaarkood. Si kastaba ha noqotee, waa magaalo wax badan ku leh dadyowga kale ee reer Yurub iyo kuwa Mediterranean, oo ay la wadaagaan qaab nololeed iyo dhaqan. Waxaan arki doonaa qaar ka mid ah caadooyinkeeda ugu muhiimsan.
1 Jabinta suxuunta
3 Aroosyada Griiga
5 Giriiggii hore
6 Ciidaha Giriigga
Tani waa mid ka mid ah caadooyinka ugu badan ee soo jiita dareenka qof kasta oo taga Griiga. Shaki la’aan, waa caado aan ku aragnay filimada qaar waana sababta ay haddaba u tahay wax adduunka oo dhan laga yaqaan. Dalxiisayaashu waxay u arkaan a caado qaas ah oo qosol badan oo suxuunta lagu jebiyo. Waa wax iska caadi ah dabaaldegyada waaweyn ee ay asxaabta iyo qoysku isugu yimaadaan si ay suxuunta u jebiyaan. Tani waxay u adeegtaa inay muujiso farxad maanta, laakiin asal ahaan waxay u egtahay mid wareersan. Waxaa la rumeysan yahay in loo sameeyay in laga eryo jinniyo shar leh markay u soo dhowaadeen, taasoo ka dhigaysa inay aaminaan in goob rabshado ka dhacayso Haddii ay noogu muuqato wax la yaab leh in qof uu ku dambeeyo weelashooda, waa inaan ogaanno in guryaha ay caadi ahaan ku leeyihiin maacuun qiimo jaban iyo u diyaargarow fudud oo ah waxa ay u adeegsadaan munaasabadahaas Marka haddii aad nasiib u yeelato inaad ka soo qayb gasho xaflad Griig ah, ha moogaanin fursadda inaad ku jebiso suxuunta qaar. Xitaa makhaayadaha waxay leeyihiin taargo ay ku jabaan inta lagu jiro dabaaldegga.
ka Qoysaska Griiggu waa dhaqan waana kuwo aad isugu dhow. Dareenkaan waxay u egyihiin Talyaani, maxaa yeelay waxay sidoo kale ahmiyad weyn siinayaan kulamada qoyska waqtiga cuntada. Haddii aan dalxiis ahaan ugu safreyno jasiirado yaryar, waxaa hubaal ah inay noo sahlanaan doonto inaan aragno qaab nololeedka soo jireenka ah iyo kan qoys ee ay leeyihiin. Si kastaba ha noqotee, ma awoodi doonno inaan qiimeyno muhiimadda weyn ee ay u leeyihiin cunnooyinkaas saaxiibtinimo qoyska dhexdiisa.
ka Aroosyada Giriiggu sidoo kale waa kuwo dhaqameed. Si ka duwan xafladaha kale, aroosyada Giriigga aroosku waa inuu aroosadda ku sugaa albaabka kaniisadda, maadaama ay gacmaha isula wadaagi doonaan gacmaha iyo shumacyo cadcad. Labadaba madaxooda ayaa taaj loo saari doonaa inta xafladu socoto. Wareegyadu waa inay isweydaarsadaan seddex jeer sharaf sharaf ah Saddexmidnimada Saddexmidnimada. Inta lagu guda jiro xafladda waxaan mar kale arki karnaa kalagoynta suxuunta caadiga ah ee ciidaha Giriigga, xilliyada farxadda ugu weyn. Dhanka kale, waa wax iska caadi ah in dabaaldegyadaan dadka lagu dhiirrigeliyo inay soo bandhigaan qoob ka ciyaar dhaqameed ah, kaas oo lagu sameeyo iyadoo midba midka kale uu ku tiirsan yahay garbihiisa isla markaana lugaha u wada dhaqaajinayo si isku mid ah qoob ka caan ah. Haddii aad ka soo qayb geli karto mid ka mid ah xafladahan qoob ka ciyaarka, marwalba waad isku dayi kartaa inaad fuliso.
El Rebético waa sheeko gabay ah kaasoo ku dhashay Aasiya Yar iyo inuu horeyba qeyb uga yahay dhaqanka Griiga. Waxaa lagu ciyaaraa qalabka loo yaqaan 'bouzouki' oo qayb ka ah qoyska lute, oo si weyn loogu isticmaali jiray qarniyadii dhexe dhibanayaasha. Heestan xitaa waad hagaajin kartaa waxayna leedahay hawo satirical ah. Waxay ahayd hees caan ah oo sababtaas awgeed ay uga badbaaday waqtiga.
Waxaa jiray dhaqammo badan oo ku yaal Giriiggii Hore oo aan ka warqabno mahadnaq dhammaan dhaxalkii ay ka tagtay ilbaxnimadan horumarsan. Mid ka mid ah caadooyinka aaska Waxay ka koobnayd laba indhood oo ninkii indhihiisu indhaha u geliyeen si uu u bixiyo lacagtii markabkii u waday xeebta kale. Dharka sidoo kale waa mid aad loo aqoonsan karo, oo leh dharka dhaadheer ee loo yaqaan 'chiton' kaas oo maro weyn oo loo yaqaan himatión ay ka gudubtay.
Kirismaska ​​sidoo kale waa laga xusaa Giriigga. Maanta caadada ah in la dhigo geed Kirismas ah ayaa caan ka noqday sida dalal kale oo badan oo adduunka ah. Si kastaba ha noqotee, halkan waa mid dhaqameed qurxiyaan doomaha si loo sharfo Saint Nicholas, Qaabka badmaaxiinta. Waa inaan la iloobin in Griiga uu xiriir dhow la leeyahay badda oo qeyb weyn oo ka mid ah dadkeeda ay ku noolaayeen kalluumeysiga, gaar ahaan jasiiradaha yaryar. Kalikántzaroi waa jilibyo yar yar oo sida muuqata imanaya Kirismaska ​​waxayna gurguuranayaan guryaha iyagoo maraya tubbada qiiqa si ay uga baqaan kuwa ku soo dhaca. Waxay baxaan XNUMXda Janaayo, dhamaadka Kirismaska. Habeenki sanadka cusub, keega San Basilio waa la cunaa, taas oo dhaqan ahaan u eg roscón de Reyes, maxaa yeelay qofkasta oo lacagta ku dhex hela ayaa nasiib yeelan doona.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Greece » Caadooyinka Griiga